AgriTourism - မိသားစုခရီးသွားခြင်း Seymour, IN | ဂျက်ဆင်ကောင်တီ itor ည့်သည်စင်တာ
စက်တင်ဘာလ 26, 2021 812.524.1914
ဤသည်ကိုယ်တိုင်လမ်းညွှန်မောင်းနှင်သည့်ခရီးသည်“ ရှင်သန်နေသောလယ်ယာမြေများ” နှင့်၎င်းအားကျွန်ုပ်တို့၏ခရိုင်၏အရေးအပါဆုံးပိုင်ဆိုင်မှုများထဲမှတစ်ခုအဖြစ်ပြုလုပ်သောသူများအတွက်ဂုဏ်ပြုခြင်းဖြစ်သည်။ ခေတ်သစ်လယ်ယာလုပ်ငန်းမှစပြီးအလွန်ထူးဆန်းသောမိသားစုရှိလယ်ယာမြေအထိသင်တွေ့ကြုံခံစားရမည်။ မွေးမြူရေးခြံများနှင့်သူတို့၏သဘာဝကျက်စားရာနေရာများတွင်စောင့်ကြည့်ရမည့်တိရစ္ဆာန်များစွာရှိလိမ့်မည်။ အလှပဆုံး Vistas နှင့် Drives အချို့ကို Jackson ကောင်တီ၏ဤအပိုင်းတွင်ရရှိနိုင်သည်။
သင်၏ခရီးစဉ်ကိုနာရီအနည်းငယ်အကြာ၌ပြီးစီးနိုင်သည်။ သင်၏စိတ်ဝင်စားမှုများနှင့်သင်မည်မျှကြာကြာလည်ပတ်လိုသည်ကို မူတည်၍ တစ်ရက်ဝက်ခန့်ကြာနိုင်သည်။
4683 အက်စ်ပြည်နယ်လမ်းမကြီး 135, Vallonia
မိသားစုလယ်ယာသည်ဂျက်ဆင်ကောင်တီတွင်ရှည်လျားသောသမိုင်းကြောင်းရှိခဲ့ပြီးပြည်နယ်လမ်းမကြီးပေါ်ရှိ Brownstown မှ ၇ မိုင်အကွာတွင်တည်ရှိသည်။ ရိတ်သိမ်းချိန်အတွင်းကျွန်ုပ်တို့၏လတ်ဆတ်သောအသီးအနှံများကိုပျော်မွေ့ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏စျေးကွက်သို့လာပါ။ သင့်မိသားစုစားပွဲအတွက်လတ်ဆတ်ဆုံးနှင့်အကောင်းဆုံးသောအရာများကိုကမ်းလှမ်းပေးသည့်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့အလွန်ဂုဏ်ယူပါသည်။ လတ်ဆတ်သော၊ ဒေသအလိုက်စိုက်ပျိုးသောအသီးအနှံမှသည်ဒေသခံပျားရည်နှင့်သစ်သီးများအထိသင့်ကိုဖုံးလွှမ်းထားသည်။ ဒေသဆိုင်ရာလက်မှုပစ္စည်းနှင့်အိမ်အလှဆင်ပစ္စည်းများကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့အသိုင်းအဝိုင်းမှသယ်ဆောင်သည်။ အင်ဒီယားနားပြည်နယ်၊ ဂျက်ဆင်ကောင်တီတွင်ပျော်မွေ့စွာနေပါ။
နွေရာသီမှတဆင့်နွေ ဦး ရာသီ 6077 အက်စ်ပြည်နယ်လမ်းမကြီး 135, Vallonia, 812-358-3377 ။
မိသားစုလုပ်ကိုင်သည့်လယ်ယာစျေးကွက်၏ပုံရိပ်သည်လမ်းဘေးလယ်ယာစျေးကွက်မှမျှော်လင့်ထားသည့်အရာအားလုံးကိုကမ်းလှမ်းသည်။ ပြောင်း၊ ဖရုံသီး၊ ခရမ်းချဉ်သီး၊ ပဲအစိမ်း၊ cantaloupe နှင့်ဒေသထွက်ထုတ်လုပ်ထားသောပျားရည်ပင်ကို Hackman မိသားစုနှင့်သူငယ်ချင်းများ၏မျိုးဆက်များကလည်ပတ်သောစျေးကွက်တွင်ရရှိနိုင်သည်။ Vallonia နှင့် Salem အကြားတည်ရှိပြီးလယ်ယာစျေးကွက်သည် Brownstown နှင့် ၁၀ မိုင်အကွာတွင်ရှိသော်လည်းကားမောင်းရန်သင့်တော်ပါသည်။
3147 အက်စ်ကောင်တီလမ်းမကြီး 300 ဒဗလျူ, Vallonia, 812-358-5618 ။
နှစ်များတစ်လျှောက်နှစ်ရှည်နှစ်ပတ်လည်များနှင့်ရာသီဥတုအခြေအနေများအရအသီးများ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ သကြားလုံးများ၊ ဂျယ်လီများနှင့်ပစ္စည်းများကိုရှာဖွေရန်ခက်ခဲသောအိမ်တွင်းစျေးကွက်အမျိုးမျိုးနှင့်အမျိုးမျိုးသောအသီးများ၊ ၀ န်ဆောင်မှုအပြည့်ရှိသောစားသောက်ဆိုင်သည် guests ည့်သည်များအားကျွေးမွေးပြီးမနက်စာ၊ နေ့လည်စာ၊ ညစာနှင့်ပီဇာများကိုပါပေးသည်။ ခရမ်းချဉ်သီးများ၊ ဖရဲသီးများနှင့်ဖရုံသီးများနှင့်သခွားသီးများအထိလူတိုင်းအတွက်တစ်ခုခုစျေးကွက်ပေးသည်။ သေးငယ်တဲ့ petting တိရစ္ဆာန်ရုံနှင့်သေးသေးလေးဂေါက်ကွင်းရှိတယ်။ လတ်ဆတ်သောဖြတ်ထားသောခရစ္စမတ်သစ်ပင်များနှင့်အားလပ်ရက်များအတွက်လတ်ဆတ်သောလွမ်းသူ့ပန်းခွေများ။
Walnut Street Parking Lot, Seymour, မေလမှအောက်တိုဘာလအထိ
Seymour မြို့လယ်ရှိရာသီအလိုက်လယ်သမားများစျေးကွက်သို့ထုတ်လုပ်မှုနှင့်အမျိုးမျိုးသောကုန်ပစ္စည်းများကိုကြိုဆိုပါသည်။ “ MarketLite” ကိုတနင်္လာနေ့ညနေ (၂) နာရီမှညနေ (၆) နာရီထိ၊ နွေ ဦး ရာသီမှနွေ ဦး ရာသီအထိမွန်းတည့်ချိန်နံနက် ၈ နာရီမှအောက်တိုဘာလစနေနေ့များမှနံနက် ၈ နာရီမှညနေ ၆ နာရီအထိပြုလုပ်သည်။ စျေးကွက်အပြည့်အစုံကိုမေလမှစက်တင်ဘာလအထိနံနက် ၈ နာရီမှမွန်းတည့်ချိန်အထိကျင်းပမည်ဖြစ်သည်။ လတိုင်း၏တတိယစနေနေ့၊ ဇွန်မှစက်တင်ဘာအထိသည်အထူးစျေးကွက်ဖြစ်သည့်စနေနေ့များတွင်ချက်ပြုတ်ခြင်းသရုပ်ပြခြင်း၊ ကလေးလှုပ်ရှားခြင်း၊ ဂီတနှင့်အခြားအရာများဖြစ်သည်။
Brownstown Ewing ပင်မစိန့်လယ်သမားစျေး
ထုတ်ကုန်များနှင့်ကုန်ပစ္စည်းများ Brownstown အတွက်ရုံးရင်ပြင်မှာကြိုဆိုပါတယ်။ စျေးကွက်ကိုသောကြာနေ့တိုင်းနံနက် ၉ နာရီမှညနေ ၁ နာရီအထိဇွန်လမှအောက်တိုဘာလအထိပြုလုပ်ကြသည်။
101 အနောက် Howard လမ်း
ထုတ်ကုန်များနှင့်ကုန်ပစ္စည်းများကြိုဆိုကြသည်။ စနေနေ့တိုင်းကိုနံနက် ၉ နာရီမှမွန်းတည့်ချိန်အထိပြုလုပ်သည်။ 9-812-390 ကိုခေါ်ပါ။
5875 အီး Co. , လမ်း 875N ။ , Seymour, လမ်းဘေးထုတ်ကုန်ရပ်။
11181 N. အမေရိကန် 31, Seymour, 812-521-9125, လမ်းဘေးထုတ်ကုန်ရပ်။
ဤစျေးကွက်သည်အနောက် Tipton လမ်းရှိလမ်းဘေးရပ်ကွက်လည်းပါရှိသည်။
Lot Hill နို့ထွက်မွေးမြူရေးခြံ
10025 N. Co. , လမ်း။ 375E ။ , Seymour, 812-525-8567, www.lothilldairy.com
မိသားစုပိုင်နို့ထွက်မွေးမြူရေးခြံ၊ အဖြူနှင့်ချောကလက်နို့နှင့်ဖြန့်နိုင်သောဒိန်ခဲအပါအ ၀ င်ဒိန်ခဲအမျိုးမျိုးကိုထုတ်လုပ်သည်။ Gelato သည်အရသာအမျိုးမျိုး၌လည်းရရှိနိုင်သည်။ ၎င်းတို့အားနို့နှင့်နွားနို့ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ပစ္စည်းများကိုဒေသခံလယ်သမားစျေးကွက်များနှင့်၎င်းတို့ပိုင်ဆိုင်သည့်လယ်ယာစတိုးဆိုင်များမှရောင်းချသည်။
Plumer နှင့် Bowers ခြံ
4454 အီး Co. , လမ်း။ 800N ။ , Seymour, 812-216-4602.
၁၈၈၆ တွင်တူညီသောမိသားစုလယ်ယာမြေသည်သမားရိုးကျအပင်များမှရသောသီးနှံများကိုသဘာဝမှအာဟာရသိပ်သည်းသည့်ထုတ်လုပ်သည့်စက်ထဲသို့ပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်သည်။ ရရှိနိုင်သည့်လယ်ယာမြေများတွင်မြက်စား၊ အမဲသား၊ အမဲသား၊ ဂျုံမှုန့်နှင့်ပေါက်ပေါက်တို့ပါ ၀ င်သည်။
Aquapon LLC မှ
4160 အရှေ့ကောင်တီလမ်း 925N, Seymour
Aquapon သည်ဒေသတွင်းဖန်လုံအိမ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤခြံသည်ဒေသခံစတိုးဆိုင်များ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်ဖောက်သည်များအားအစိမ်းရောင်နှင့်တီလားပီးယားကိုရောင်းချသည်။
Rolling Hills Lavender လယ်ယာ
4810 အရှေ့ကောင်တီလမ်း 925N, Seymour
ဤလယ်ယာသည်အရည်အသွေးမြင့်မားသောအရည်အသွေးနှင့်ကြီးထွားလာသော Cavland ရှိ ING Farmland တွင်စိမ်းလန်းစိုပြေနေသည့် Lavender ကိုဂုဏ်ယူသည်။ လာဗင်နစ်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း၏အိပ်မက်သည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင်စတင်ခဲ့ပြီးယခုအခါသူတို့၏မြေယာသည်လာဗင်ဒါအပင်ပေါင်း ၂၀၀၀ ကျော်၏နေရာဖြစ်သည်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင်အစုအဝေးများကို ၀ ယ်ယူနိုင်သည်။
ဝိုင်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း / ဘီယာစက်ရုံများ
Chateau de Pique ဝိုင်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းနှင့်ဘီယာစက်ရုံ
Chateau de Pique မှာမြည်းစမ်းခန်းနှင့် reception ည့်ခံနေရာသည်အလွန်ကောင်းမွန်သောတောင်စောင်းကျီတွင်ရှိသည်။ အရသာခန်းတွင်တစ်ပတ်လျှင်ခုနစ်ရက်အခမဲ့အရသာရှိသည်။ အဖြူနှင့်အနီရောင်နှစ်မျိုးစလုံး၏ကသုံးပွင့်သည်ထိုမြေကွက်ကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးဝိုင်စာရင်းတွင်မူ Riesling မှ Semi-Sweets အထိ Sweet Ports အထိ ၂၅ မျိုးခန့်ရှိသည်။ နောက်တစ်ခေါက် Chateau de Pique ၏ဘီယာကိုကြိုးစားရန်မမေ့ပါနှင့်! Chateau de Pique တွင်လည်းဒေသတွင်း၌ဂြိုလ်တုစတိုးဆိုင်များရှိသည်။
Chateau de Pique သည် 6361 North County Road 760 East, Seymour, 812-522-9296 တွင်တည်ရှိသည်။
Salt Creek အဘိဓါန်ဝိုင်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း
Salt Creek Winery သည် ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် Lee မိသားစုအတွက်ဝါသနာအနေနှင့်စတင်ခဲ့သည်။ ဝိုင်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသည် Indiana ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းရှိတောင်တန်းများပေါ်တွင်တည်ရှိပြီး Hoosier National Forest နှင့်နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေသည်။ စပျစ်သီးဝိုင်နှင့်အတူလီ၏စပျစ်သီးများ၊ စတော်ဘယ်ရီ၊ ချယ်ရီသီး၊ သစ်တော်သီး၊ Salt Creek ဝိုင်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသည် Merlot၊ cabernet sauvignon၊ chambourcin၊ Riesling၊ နေ ၀ င်မှုအနီရောင်၊ ဘလက်ဘယ်ရီ၊ ဂန္ထဝင်အဖြူ၊ ရိုင်းဘလက်ဘယ်ရီ၊ Plum, blueberry, သရက်၊
Salt Creek Winery သည်ဖရီးတောင်းရှိအနောက်ကောင်တီလမ်း ၉၅၅ မြောက် ၇၆၀၃ တွင်တည်ရှိသည်။ 7603-925-812 ။
Seymour Brewing Company သည် Seymour ၏ပထမဆုံးလည်ပတ်ထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။ ဝင်၍ စမ်းပါသို့မဟုတ်သင်၏စိုက်ပျိုးသူကိုဖြည့်ပါ။ ဘရူဘွပ်ပွဲတွင်ရံဖန်ရံခါကျင်းပသောတိုက်ရိုက်ဂီတနှင့်ရာသီဥတုသာယာသည့်အခါ Harmony Park နှင့်ကပ်လျက်တီးလုံးများကိုခံစားပါ။ နွေရာသီတွင်အနုပညာရှင်တစ် ဦး အပြည့်အဝစီစဉ်ထားသည်။ ဘီယာအမျိုးမျိုးကိုထိပုတ်ပါ။ ဘရွတ်ကလင်ပီဇာကုမ္ပဏီတွင်တည်ရှိသည်။
Seymour စိုက်ခင်းလုပ်ကိုင်မည်သည့်ကုမ္ပဏီသည် Seymour၊ West Second Street 753 တွင်တည်ရှိသည်။ 812-524-8888 ။
Driftwood ပြည်နယ်ငါး Hatchery
၁၉၃၀ ပြည့်လွန်နှစ်များနှောင်းပိုင်းတွင် Works Projects Administration (WPA) လက်အောက်တွင်တည်ဆောက်ခဲ့သောဤရေပူစက်ရုံသည်မြေကျွေးမွေးမြူရေးကန် ၉ ခုနှင့်ရေချိုငါးမျှားသည့်ရေကန်တစ်ခုပါဝင်သည်။ မွေးမြူရေးကန်များမှာ ၀.၆ မှ ၂.၀ acကရှိပြီးအရွယ်အစားမှာ ၁၁.၆ acကဖြစ်သည်။ နှစ်စဉ်နှစ်လက်မအကျယ် ၂၅၀,၀၀၀၊ လေးလက်မအရွယ်ကြီးမားသောပါးစပ်ကြီးဘေ့စ်နှင့်ရုပ်သံလိုင်း ၈၅၀၀ လိုင်းများကိုနှစ်စဉ်ထုတ်လုပ်သည်။ ထို့နောက် Indiana ၏အများပိုင်ရေများကိုသိုလှောင်ထားသည်
(Indiana ပြည်နယ် DNR မှပံ့ပိုးသည်)
Driftwood State Fish Hatchery သည် Vallonia, 4931 South County Road 250 West, 812-358-4110 တွင်တည်ရှိသည်။
Vallonia ပျိုးခင်း၊ သစ်တောဌာန
ပျိုးခင်းမစ်ရှင်သည်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးအတွက်အရည်အသွေးမြင့်စက်ရုံသုံးပစ္စည်းများအားအင်ဒီယားနားပိုင်ရှင်များထံဖြန့်ဖြူးရန်ဖြစ်သည်။ မျိုးစေ့ ၆ သန်းမှနှစ်စဉ်ပျိုးပင်သန်း ၄ သန်းခွဲစိုက်ပျိုးသည်။ 60က ၂၅၀ စက်ရုံသည်သစ်ခုတ်များနှင့်သစ်မာများကိုထုတ်လုပ်သည်။
Vallonia ပျိုးခင်း၊ သစ်တောဌာနသည် Vallonia ရှိ 2782 West County Road 540 South တွင်တည်ရှိသည်။ 812-358-3621
Schneider ပျိုးခင်း, Inc
George Schneider သည်ငယ်စဉ်ကတည်းကပင်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလှပစေရန်သစ်ပင်များစိုက်ပျိုးရန်ရည်မှန်းချက်တစ်ခုရှိခဲ့သည်။ ဂျော့ခ်ျသည်မိဘများကြက်မွေးမြူရေးခြံမှချေးယူပြီးလယ်ယာမြေများကိုချေးယူသည့်မြေကွက်ပေါ်တွင်သစ်ပင်များနှင့်ချုံဖုတ်များကိုစတင်စိုက်ပျိုးခဲ့သည်။
အထက်တန်းကျောင်းပြီးသည့်နောက်တွင်ဂျော့ခ်ျသည်မယ်လလင်းစိုင်းဒါနှင့်လက်ထပ်ခဲ့သည်။ သူနှင့်သူ၏ဇနီးအသစ်သည်မိသားစုခြံမှ ၂၄ purchasedက ၀ ယ်ခဲ့ပြီးလက်လီပျိုးခင်း - Schneider Nursery ကိုတည်ထောင်ခဲ့သည်။
လက်ရှိတွင်ပျိုးခင်းသည်500က ၅၀၀ ကျော်ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားပြီးအင်ဒီယားနားတောင်ပိုင်းရှိအကြီးဆုံးပျိုးခင်းဖြစ်သည်။ Schneider's သည်ဥယျာဉ်ခြံဥယျာဉ်များကိုလက်ကားရောင်းသူများနှင့်လက်လီရောင်းချသူများအားရောင်းချသည်။
Schneider Nursery, Inc သည် Seymour ရှိအရှေ့အမေရိကန် ၅၀၆၆ တွင်ဖြစ်သည်။ 3066 ။